सिंगटी हाइड्रोको आइपिओमा १६ लाख २३ हजारले दिए आवेदन, तपाईंलाई कति पर्ला ? | सुप्रीम खबर
सिंगटी हाइड्रोको आइपिओमा १६ लाख २३ हजारले दिए आवेदन, तपाईंलाई कति पर्ला ?
२०७७ चैत्र १०, मङ्लबार, ९: १३PM
सिंगटी हाइड्रोपावरको प्राथमिक सेयर (आइपिओ)मा अन्तिम दिनसम्म १६ लाख २३ हजार ४५० जनाले आवेदन दिएका छन्।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार सो संख्याले २ करोड ४७ लाख कित्ता सेयर माग गरेका हुन्। २ अर्ब ४७ कराेड रुपैयाँ आवेदकको बैंक खातामा ब्लक भएको छ। कर्मचारी तथा सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएपछि कम्पनीले सर्वसाधारणलाई कुल २६ लाख ९७ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्नका लागि आवेदन खोलेको थियो।
२ लाख ६९ हजार ७ सय जनाले १० कित्ताका दरले सेयर पाउने छन्। १३ लाखभन्दा धेरैको हात रित्तो हुनेछ।
कस्तो छ कम्पनी/आयोजना ?
दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिकामा कम्पनीले सिंगटी हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। समग्रमा आयोजनाको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको कम्पनीको दावी छ।
कुल २५ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २२ करोड छ। कुल ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ।
७० प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहको छ भने १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि र बाँकी २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी हुन लागेको हो। कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी १ अर्ब १ करोड छ।
केयर नेपालले कम्पनीको आइपिओलाई बीबी माइनसको रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले दायित्व पुरा गर्न कम्पनी मध्यम अवस्था रहेको संकेत गर्छ। गत पुसमै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेकोमा विद्युत गृह परीक्षणको काम बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण छ।
अघिल्लो लेखमाविद्युतीय कारोबार ह्वातै बढ्यो, क्यूआर कोड मार्फत भु्क्तानीमा क्रान्ति
अर्को लेखमाविद्युत् व्यापार सम्झौताको लागी बंगलादेशले नेपालसँग गर्यो प्रस्ताव , के नेपाल तयार छ ?
सुप्रीम विशेष - २०७८ बैशाख २५, शनिबार, ४: ३६PM